လုပ်နေတာအတော်များများခေတ်မီအမျိုးသမီးများ, နောက်ပြီး , တောက်ပ, အပြုသဘော, ရောင်စုံဖြေရှင်းချက်ကြိုက်တတ်တဲ့။ နယူးဒီဇိုင်းများနှင့်နည်းစနစ်အတော်လေးမကြာခဏပေါ်လာပါသည်။ ထိုသူအချို့အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအဘို့, လက်သည်းပေါ်မှာဓါတ်ပုံတွေကိုအစက်ကိုယူပါ။ သူတို့ကအရသာကြည့်ရှုပါ။ ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာကသူတို့ကိုတဲ့ professional အနုပညာရှင်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးအကောင်အထည်ဖော်ရန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကိုယ့်စက်ကိုဝယ်, အိပ်မက်, ဖန်တီးအလွန်အံ့သြစေ!
ပထမဦးစွာသင်ဝေါဟာရများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ အစက် - အမြင်အာရုံနှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမှာသေးငယ်တဲ့ပုတီးနှင့်အတူတစ်ဦးကို double-တဖက်သတ်ခဲတံနဲ့တူအောင်သေးငယ်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဖြုတ်ဘောလုံးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၏နိုင်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ဒီ pixels ကိုဆွဲဘို့ကိုဆိုလိုသည်။ တင်းကြပ်စွာဤအရပ်မှအဆိုပါတူရိယာ၏အမည်နှင့်တူ၏, စကားပြော - အင်္ဂလိပ်ထဲမှာအစက်က "ပွိုင့်" ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။
အစက်ကိန်းဂဏန်းများရေတိုနှင့်တာရှည်လက်သည်းအပေါ်ကောင်းသောကြည့်ရှုပါ။ အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံဒီဇိုင်း - ပုံမှန်အတိုင်းအချက်။ သူတို့ကကျပန်းတချို့အစီအစဉ်သို့မဟုတ်အပေါ် affixed ရောင်စုံ, ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, ရှိနိုင်ပါသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အစက်အပြောက်တူညီခဲ့ကြသည်, သင်မှန်မှန်ဆေးသုတ်ထဲမှာဘောလုံးကို dunk ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တိုင်းလာမယ့်အချက် (အလွန်မကြာခဏများမှာစကားမစပ်, အရေးဆွဲတွင်လည်းအသုံးပြုသည်အရာ,) လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကော်မာ - ဒါဟာလက်သည်းပေါ်မှာအစက်တွက်ဆဖို့လည်းလွယ်ကူပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပွိုင့်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့ရရှိသောနိုင်ပါသည်, ပြီးတော့နည်းနည်းကရောက်ရှိဖို့။ ရုံတစ်ဖြောင့်လိုင်းအတွက်တိုးချဲ့နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မျဉ်းအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကပါဘူး။ ကော်မာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်နှင့်မူရင်းရေးဆွဲရရှိခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်လက်သည်းပေါ်တွင်အစက်သုံးပြီးသင်တစ်ဦးကိုဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ကူးယဉျနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များစီစဉ်, သင်အလွယ်တကူလှပသောအဆင်တန်ဆာ, ပုံစံ, ပုံစံကိုရရှိနိုင်သည်။ လူအပေါငျးတို့ကြောင့်အချို့ကိုသင်ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကပ်ဖို့လိုတယ်, ဿုံပြည်မှထွက်လာသော:
သင့်တော်နှင့်သမားရိုးကျသုတ်ဆေးနှင့်ရေးဆွဲရန် acrylic သုတ်ဆေး , ရေ-based ။
အစက်နှင့်တစ်ဦးခဲတံတူပေမယ့်, သင်လက်သည်းမှ perpendicular စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေကြီးမားစက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်အဖြူရောင်လက်သည်း၏ nakraste တစ်ဝက်ခြယ်။
အဖြူခန်းခြောက်နေစဉ်, သတ္တုပါးအနက်ရောင်ယွန်း၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလျှောက်ထားပါက obmoknite Dots (အလယ်အလတ်အရွယ်အစားဘောလုံးကို) ။
နားရွက် - စက်ဝိုင်း၏အစွန်းပေါ်တွင် cuticle ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်နှစ်ခုအချိုးကျမှတ်ထားတော်မူ၏။ မျက်စိ - ထိုအခါ shaded အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်၏ဗဟိုနှစ်ခုထက်ပိုသောအချိုးကျအချက်ဆွဲပါ။
ရောင်ရမ်းခြေဆစ်ခြေဘဝါး - အကြောင်းရင်း
ခြေထောက်ပေါ်အဆစ်ရောင်ခြင်း - ကုသမှု
Nice လွယ်ကူ - တစ်ဦးအမြန်ခြေသည်းအဘို့အစိတ်ကူးများ
Ketchup နှင့်အတူသခွားသီး - အရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောချက်ပြုတ်နည်းများစပ်ထိန်းသိမ်းရေး
သားမွေးခြင်းနှင့်ဇာ - ဖက်ရှင်၏နောက်ဆုံးပေါ်ထငျ
ပိန်မုန့်ကိတ်မုန့် - အိမ်လုပ်အချိုပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းချက်ပြုတ်နည်းများ
Cannon Si Jago
Pneumothorax - ကုသမှု
သငျသညျဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ: 10 မေးခွန်းများကိုနှင့်အဖြေကို
Vanessa Hudgens အမျိုးသားရေးဘဏ္ဍာကိုလုယူထားပါတယ်
အဘယျသို့အစားအစာများဗီတာမင် B2 ဆံ့?
ဒိန်ခဲနှင့်အတူ pastry - အဘယ်အရာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရသာရှိတဲ့ဖုတ်သလော
Spirometry - စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ
မီးဖိုချောင်အစုံ - ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း